Nody Niaraka Tamin’ny Praiminisitra Lefitra Rosiana Tokoa Ve Ilay Alika Nijaly Natao Andrana Ara-tsiansa? · Global Voices teny Malagasy
Manana Fisalasalana ny vala miteny rosiana
Voadika ny 15 Janoary 2018 15:26 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, عربي, English
Izany rehetra izany dia tao anatin'ny hetsika natao tamin'ny faran'ny volana Desambra 2017 noho ny fitsidihan'ny filoha Serba, Aleksandar Vučić, avy amin'ny praiminisitra lefitra Rosiana sady lehiben'ny indostrian'ny fiarovana, Dmitry Rogozin.
Tsy nety naneho hevitra momba ny raharaha ny dekàn'i Rogozin, praiminisitra lefitra, na dia tsy maintsy mikasika an'i Rogozin tenany mihitsy aza ny resabe, satria tamin'ny alin'ny faran'ny taona hifoha taombaovao, nandefa ny sariny niaraka tamin'ny vadiny, ny alikany, sy ny alika keliny nompiana vao haingana, izay voalaza fa tena mitovy tanteraka tao anatin'ilay lahatsary izy:
Nikolas no anaran'ilay alika kely natao andrana ary avy eo nompian'i Rogozin. Nanao izay vitany ny fampahalalam-baovaom-panjakana Rosiana mba hanasongadina ny herim-pon'ilay alika, sy ny fahalasamany ary ny fanahiny mivaivay, ary ny fomba nanampiany tamin'ny fandrosoana ara-tsiansa manan-danja toy ny fanatsarana ny fiveloman'ny tantsambo tafahitsoka anaty sambo nilentika an-dranomasina .
Ilay sioka, izay niparitaka haingana, dia mety avy amin'ny fanamarihana tamin'ny Andron'ny Taombaovao nataon'i Anton Krasovsky, mpanao gazety Rosiana ao amin'ny Akon'i Moskoa, radion'ny mpanohitra:
TJournal, tranonkalam-baovao Rosiana, nanao fanadihadiana manokana ary nanatsoaka hevitra fa, raha ny sary faharoa taorian'ny andrana no jerena, dia toa mitovy tanteraka amin'ilay alika mihitsy, izay toa velona sy mahazo aina tsara eo an-tsandrin'i Rogozin.
Raha tezitra tamin'ilay lahatsary ianao, dia mahereza. Na nompian'i Rogozin tokoa ilay alika na tsia, dia toa nahazo ny valisoany izy. Tany am-piandohan'ny volana Desambra 2017, talohan'ny fampisehoana andrana rano azo fohana, nandefa balafomanga (saingy efa voasaringotra sahady tamin'ny resaben-kolikoly maro) avy teo amin'ny Cosmodrome Vostochny, seranan'habakabaka ao amin'ny Farany Atsinanana ao amin'ny firenena i Rosia.
Ao anatin'ny asany amin'ny maha filohan'ny indostrian'ny fiarovana azy, tompon'andraikitra amin'ny fandaharan'asa an-habakabaka ao Rosia tokoa i Rogozin. Indrisy fa ho azy sy ny tetikasa iandraketany, mampiditra singa [fangitra] diso ireo programeran'olombelona, ary taorian'ny fandefasana nahomby teny an-habakabaka, dia very fifandraisana tamin'ny zanabolana izay tao anatin'ny balafomanga ry zareo.